[Steam] Beta Portal ankehitriny Azo alaina ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
[Steam] Portal Beta azo alaina amin'ny Linux izao
Ianareo izay efa namaky ny lahatsoratro teo aloha Steam Ho fantatrao sahady fa ny iray amin'ireo lalao izay nandrasako mihoatra ny fampisehoana dia ny Portal, lalao olona voalohany hafa satria amin'ity lalao ity dia tsy maintsy mandresy sakana sy fitsapana amin'ny lojika isika.
Amin'ity lalao ity dia mandray ny andraikitry Chell isika, vehivavy izay taranja andrana ho an'ny Aperture Science. Feo robotika vehivavy iray no hiteny amintsika hilaza amintsika ny fitsapana, hiarahaba antsika, sns. Ary handalo ny fitsapana hampiasainay ny vavahady ary afaka hanao ny basy vavahady izahay, izay hampiasainay hamoronana ny anao manokana mba hahafahanao mivoaka voalohany amin'ireo fitsapana. fitsapana ary avy eo mitsidika ireo tranokala Aperture taloha handresena ireo sakana hataon'ny fahavalo antsika.
Raha tianao ny fanamby sy lalao tokony hampiasanao ny atidohanao dia ity no lalaonao. Ampirisihina mafy.
Fanamarihana: Tsy misy ny Beta raha toa ianao ka efa nividy ilay lalao tamin'ny kininy ho an'ny Windows na Mac. Ny lalao dia mitentina € 6.99, saingy mamporisika anao aho hiandry ny famoahana azy ao amin'ny magazay raha toa ka mandefa tolotra rehetra izy ireo
Pejy lalao ao amin'ny magazay Steam
Avelako ny sary nalaina ho anao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » [Steam] Portal Beta azo alaina amin'ny Linux izao
Azafady mba hamaly avy amin'ny windows aho, fa any amin'ny oniversite no ananan'izy ireo ny zavatra ianarako famolavolana sary ... fa ao an-trano dia manana ny beta ny Portal ao amin'ny xubuntu aho, saingy tsy voafaritra mazava ny momba an'io lalao io, lol Te hahafantatra aho. misaotra
Asa kanto mifanentana amin'izany.
Amin'ny ankapobeny dia sokajina ho piozila izy io, momba ny ambaratonga mandalo sy miaina hatramin'ny farany
Etsy andaniny… MANDAINGA NY CAKE !!!! > _
Tiako ity karazana lalao ity, amin'ny zavatra hafa rehetra dia very XD aho
Nomena ahy efa ela izy ireo xddd, efa misintona azy aho
Mandainga ny mofomamy.
voasedra tsara miaraka amin'i nvidia dia mety tsara, ny mampalahelo dia tsy hitako ny fandikana amin'ny teny espaniola, anglisy sy rosiana ihany fa tsara xd
Ao amin'ny lisitry ny lalao, tsindrio havanana amin'ny anaran'ny lalao, safidio ny Properties ary sokafy ny kiheba Fiteny ary safidio ny Espaniôla.
D8 tsy hita
Eny, tsy fantatro ny antony hitrangan'izany, ny fampidinana azy io ary nanana tamin'ny Espaniôla aho.
Mampiasa ny Stables na ny Steam Betas ve ianao?
Ankoatr'izay, tsy haiko ny antony tsy ahazoako ny solonanarana rehefa mitady anao
Notadiavinao ho an'ny pandev92 aho? xdddd, izany no nick ... ... tsy haiko izany! angamba amboary io avy eo sa zavatra hafa, farafaharatsiny mba xd
Tsy haiko, jereo raha afaka mahita ny ahy ianao, dia son_link
Raha misy olon-kafa te hanampy ahy dia mahavita azy izy ireo
Izy ireo dia Rohy, nahazoana alalana taminao dia nandefa fanasana taminao Steam aho.
@Gambi napetrako ny solon'anarako mba hahafahany manampy ilay tadiaviny (raha tsy misy fikasana ratsy)
Raha misy milalao Counter Strike: Source amin'ny fitsipika ankapobeny dia eo amin'ny mpizara Pishas Bravas aho (ao amin'ny forum dia manana sonia miaraka amin'ireo angona avy amin'ilay mpizara aho, manoratra amin'ny Nintendo 3DS aho mba hahafahako manome ny IP na ny anarana ankehitriny mpizara feno, heveriko fa afaka mikaroka mivantana ianao mba hahitana raha avy amin'ilay lalao mihitsy aho)
Tena mahafatifaty io lohahevitra Ubuntu ho an'ny Steam io 😮
dia ao amin'nyourour xD
Fantastic!, Amin'ny fahavaratra dia apetrako izy, ankehitriny tsy manam-potoana xD
Mahagaga! Hanome aretim-po ahy amin'ity vaovao ity aho. Raha vantany vao mametraka Arch aho, ny zavatra voalohany hataoko dia ny fametrahana Portal <3
Steam dia ao amin'ny Repos ofisialy ofisialy ka pacman -S etona fotsiny ary izany ^^
Ny Linux 1% dia lainga !! Ankafiziko ity lalao ity 🙂
1% eny ... 1,5% angamba eny, na farafaharatsiny izany no entintsika mandrehitra .-.
Mety hifanaraka amin'ny Debian Squeeze na Wheezy ve izy io? Satria nolazaina tamiko fa mila manavao ny mpamily horonantsary Mesa aho raha manana Intel tafiditra.
Ny en64 bits dia sarotra apetraka, ny zavatra hafa dia ny mpamily intel ... raha manome anao fp 30 fps ...
L4D2 beta koa mivoaka! 🙂
Andraso ny vidiny antsasak'adiny, hanaporofoana izany ehehe
Nahazo fanavaozana aho, efa manana izany amin'ny Espaniola xd
Vaovao tsara ho an'ny Gamers!
Izany koa dia mahatonga an'i Linux manintona kokoa ny mpampiasa Windows =)!
Ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga amin'ity rafitra miasa malala ity dia ny famenoany lalao. Tsia tsia, tsy ratsy, fa ratsy be.
Ho an'ny lalao, miteny amin'ny solosaina, aleoko Windows, eo no apetrako ny banga rehetra tadiaviko. Avelan'ny GNU / Linux amin'ny zavatra hafa izany.
Ho an'ny eritreritra toy izany dia tsy mihoatra ny heverina fa 1% izahay, ny Rafitra miasa dia tokony ho azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra, ampiasainao amin'izay tianao. Ary aza fenoy lalao izany.
Efa nametraka azy aho. Mandeha tsara izy, saingy mijanona tsy mandeha intsony ny feo indraindray: /
Redmine 2.1.0 amin'ny Ubuntu 12.04, Canaima na Debian 6 miaraka amin'ny Apache2 sy PostgreSQL